problemclean ·6Views
problemclean · 28 Views
problemclean · 414 Views
problemclean · 433 Views
Update Model 4G Lte TV Box(ဘယ်ဆင်းကဒ်မဆို ထည့်သုံးနိုင်)
Reference - BB00003
ယခုဈေး - 120,000 kyats ✅✅✅
ယခင်ဈေး - 150,000 kyats
Website Link - https://didopc.com/YqCPe
ယခုလက်ရှိ အသစ်ထွက်လာပီး Simcard ထည့်သုံးလို့ရတဲ့ X88 4G Lte TV Box လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
Smart TV ဖြစ်ဖြစ် ရိုးရိုး TV ဖြစ်ဖြစ် Computer Monitor ကြီးကြီး တွဲသုံးပြီး Update လုပ်ခြင်ပါသလား ? Android Game ကို TV မှာ ကြည့်ပြီး ကစားခြင်ပါသလား? Online Game ကစားဖို့ မြင်ကွင်းကြီးဒါ အသုံပြုဖို့အရမ်းအဆင်ပြေလှပါတယ် ။
Android OS 7.1 ဖြစ်ပီး Playstore လည်းပါဝင်တာကြောင့် မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာကို Download ဆွဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ရုပ်ထွက်အနေနဲ့လည်း 4K ထွက်တာကြောင့် Channel လိုင်းတွေကို ကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်တွင် Wifi မရှိပါကလည်း စိတ်ပူစရာမလိုပဲ Simcard အစားထိုးအသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် internet ဖြင့်ကြည့်ချင်တဲ့ channel ကိုဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Simcard ကလည်း ဘယ် Simcard မဆို ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Channel လိ်ုင်းပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်ကြည့်ရှုနိုင်ပီး CCTV Software ကိုလည်း TV Box ကနေ ကြည့်ရှုလို့ရနိုင်ပါတယ်။ 1000+ Channel တွေလဲ အလွယ်တကူကြည့်လို့ရအောင် Base in Line တွေထည့်သွင်းပေးထားတဲ့အတွက် အရမ်းအဆင်ပြေဒါအမှန်ပါဘဲ။ HDMI ပါဝင်တဲ့အတွက် စိတ်ကြိုက် TV တွေနဲ့ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်သလို Monitor မှာလဲ ခေါင်းချိန်းသုံးပြုအသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ် ။ ကိုယ် အိမ်မှာရှီတဲ့ Desktop ကြီးအတွက် အလုပ်လုပ်လိုက် ရုင်ရှင်ကြည့်လိုက် လုပ်နိင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးထွက် Moive တွေ Cartoon တွေအစ လွယ်လင့်တကူ ရွေးချယ် ကြည့်နိုင်တဲ့အတွက် အရမ်းအဆင်ပြေဒါအမှန်ပါဘဲ။
Update Model 4G Lte TV Box(ဘယျဆငျးကဒျမဆို ထညျ့သုံးနိုငျ)
ယခုဈေး - 120,000 kyats ✅✅✅
ယခငျဈေး - 150,000 kyats
ယခုလကျရှိ အသဈထှကျလာပီး Simcard ထညျ့သုံးလို့ရတဲ့ X88 4G Lte TV Box လေးနဲ့ မိတျဆကျပေးပါရစေ။
Smart TV ဖွဈဖွဈ ရိုးရိုး TV ဖွဈဖွဈ Computer Monitor ကွီးကွီး တှဲသုံးပွီး Update လုပျခွငျပါသလား ? Android Game ကို TV မှာ ကွညျ့ပွီး ကစားခွငျပါသလား? Online Game ကစားဖို့ မွငျကှငျးကွီးဒါ အသုံပွုဖို့အရမျးအဆငျပွလှေပါတယျ ။
Android OS 7.1 ဖွဈပီး Playstore လညျးပါဝငျတာကွောငျ့ မိမိကွိုကျနှဈသကျရာကို Download ဆှဲ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ ရုပျထှကျအနနေဲ့လညျး 4K ထှကျတာကွောငျ့ Channel လိုငျးတှကေို ကွညျကွညျလငျလငျနဲ့ ကွညျ့ရှုနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
Android ဖုနျးဖွဈခဲ့မယျဆိုရငျတော့ Wirless display ကိုဝယျစရာမလိုဘဲ ဖုနျးကမွငျကှငျးကို TV မှာ ပွောငျးလဲကွညျ့လို့ရအောငျလဲ Wirless display ပါဝငျပါသေးတယျ ။
အိမျတှငျ Wifi မရှိပါကလညျး စိတျပူစရာမလိုပဲ Simcard အစားထိုးအသုံးပွုနိုငျသောကွောငျ့ internet ဖွငျ့ကွညျ့ခငျြတဲ့ channel ကိုဖမျးယူကွညျ့ရှုနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ Simcard ကလညျး ဘယျ Simcard မဆို ထညျ့သှငျးအသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ Channel လိုငျးပေါငျး ၁၀၀၀ ကြျောကွညျ့ရှုနိုငျပီး CCTV Software ကိုလညျး TV Box ကနေ ကွညျ့ရှုလို့ရနိုငျပါတယျ။ 1000+ Channel တှလေဲ အလှယျတကူကွညျ့လို့ရအောငျ Base in Line တှထေညျ့သှငျးပေးထားတဲ့အတှကျ အရမျးအဆငျပွဒေါအမှနျပါဘဲ။ HDMI ပါဝငျတဲ့အတှကျ စိတျကွိုကျ TV တှနေဲ့ခြိတျဆကျအသုံးပွုနိုငျသလို Monitor မှာလဲ ခေါငျးခြိနျးသုံးပွုအသုံးပွုနိုငျပါသေးတယျ ။ ကိုယျ အိမျမှာရှီတဲ့ Desktop ကွီးအတှကျ အလုပျလုပျလိုကျ ရုငျရှငျကွညျ့လိုကျ လုပျနိငျပါတယျ။
နောကျဆုံးထှကျ Moive တှေ Cartoon တှအေစ လှယျလငျ့တကူ ရှေးခယျြ ကွညျ့နိုငျတဲ့အတှကျ အရမျးအဆငျပွဒေါအမှနျပါဘဲ။